Aretina tiberkilaozy : 3000 Dolara ny fitsaboana olona iray -
AccueilSongandinaAretina tiberkilaozy : 3000 Dolara ny fitsaboana olona iray
Aretina tiberkilaozy : 3000 Dolara ny fitsaboana olona iray
03/10/2018 admintriatra Songandina 0
Mbola misy ny aretina tiberkilaozy na raboka eto Madagasikara. Eo amin’ny 4 isan-jato ny taha-pahafatesana eto Madagasikara. Tafakatra hatrany amin’ny 3000 Dolara kosa ny fitsaboana olona iray, izay hiantohan’ny fonds mondial. Marihina fa maimaim-poana ny fandraisana an-tanana ireo marary.
Mizara roa ny tiberkilaozy
Misy ny atao hoe tiberkilaozy “pulmonaire” dia misy koa ny hoe “extra-pulmonaire”. Ny “Pulmonaire” dia tiberkilaozin’ny tratra ary mamindra satria mila rivotra. Ao anaty tratra ao izy dia mandavaka mamonjy ny “ganglion” dia manome tiberkilaozy “ganglionnaire”. Mandeha ivelan’ny tratra aorian’izay, dia manome rano dia miparitaka mandeha amin’ny tsinay, ny atidoha ary manome ny “méningite” ho an’ny zazakely. Ny “Extra-pulmonaire” kosa dia kikisany miadana eo sisa ny olona. Izany hoe, mivoaka ivelan’ny tratra izy. Tsy mifindra amin’ny alalan’ny vilia na sotro na mifanoroka fa entin’ny rivotra izy. Ny tiberkilaozy amin’ny ankapobeny dia mikohaka na mievona ny fifindrany, fa tsy amin’ny rora mba tsy hisian’ny fanilikilihana, hoy ny Dr Razafindranaivo Andriamamonjy Turibio Anderson, lefitra teknika ao amin’ny sampandraharahan’ny ady amin’ny tiberkilaozy. Ankoatra ny fifohana sigara, fantatra fa ny fipetrahana amin’ny toerana mihiboka no mampirongatra ny aretina, ary olona marefo no tena tratrany. Raha vao tsy tratran’ny masoandro ka mikohaka dia mihena ny hery fiarovana. Mikohaka mandritra ny roa herinandro mety misy ra ny olona iray, manomboka malain-komana ihany koa, lasa mahia, misy hafanana hariva, reradreraka ary indrindray marary ny tratra, izay no fambara fa mety voan’ny aretina tiberkilaozy. “Ny olona voan’ny VIH koa mety ho tratran’ny tiberkilaozy, satria mihena ny hery fiarovana. Ireo mpisotro toaka. Indrindra ny zaza satria ny olon-dehibe no mamindra amin’ny zaza. Ohatra, mampinono ka mikohaka ilay reny dia tratra ny zazakely. Tsy manao vaksiny, BCG koa”, hoy hatrany ny fanazavan’ny Dr Razafindranaivo Turibio.
Mitoka-monina mandritra ny 9 volana
Miisa 228 ny toerana fanaovana fitiliana manerana ny Nosy. Miisa 5 kosa ny toerana fitsaboana ny mararin’ny aretina raboka eto amintsika. Ny CHU Androva, CHU Tamatave, CHU Fianarantsoa, CHU Fenoarivo, SMR Befelatanana. Raha 18 volana mitoka-monina ny fitsaboana ny aretina teo aloha dia lasa 9 volana izany amin’izao fotoana izao. Ao anatin’io fotoana io, manao tsindrona isan’andro mandritra ny efa-bolana ny marary, fanafody 7 hatramin’ny 12 isan’andro. Misy “effet psychique”, tsy mahare ny sofina, mety hamindra ihany koa satria tsy haniny ny fanafody, ka izay no anton’ny tsindrona mandritra 4 volana, raha ny fanazavana hatrany. Fantatra fa mitentina 3000 Dolara ny fitsaboana olona iray mandritra io fotoana io. Marihina fa ny fanjakana no miantoka ny fitsaboana rehetra amin’ny alalan’ny fanampiana avy amin’ny fonds mondial miady amin’ny tiberkilaozy. Ity farany izay mamatsy vola 9,21 Tapitrisa Dolara an’i Madagasikara. Hiantohana avokoa araka izany ny saran-dalana, ny sakafony, “examen complémentaire” atao amin’ny marary. Fantatra hatrany, fa 4 isan-jato ny taha-pahafatesana eto Madagasikara amin’izao, ary latsaka ny 1 isan-jato ny tsy fahombiazan’ny fitsaboana. Eo amin’ny 8 isan-jato kosa no manapaka ny fitsaboana. Miisa 31 783 kosa ireo marary tamin’ny taona 2017, ary 16 194 nanomboka janoary 2018 hatramin’ny 1 oktobra teo. Miisa 32 ireo mihininana fanafody isan’andro amin’ny tobim-pahasalamana eny amin’ny Institut d’hygiène amin’izao fotoana izao, izay mandritra ny 2 volana. Androany ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny raboka. « Ombay mitady ho lohalaharana amin’ny ady amin’ny tiberkilaozy », io no lohahevitra hanamarihana izany.
Nomarihana omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Radio. Nisy ny loa-bary an-dasy nentina nanamarihana izany satria manana anjara toerana lehibe amin’ny fitaizana ny vahoaka ny Radio na dia eo aza ny gazety an-tsoratra sy haino ...Tohiny